IScoutmob: Iziphesheli zendawo zesikhathi sangempela | Martech Zone
Kukhona ukusabela okuxubile embonini yamadili yansuku zonke lapho ubuhlungu bokwehliselwa ngokweqile sekucishe kwaqeda amanye amabhizinisi asebenzise izinsizakalo. Scoutmob Kubonakala sengathi zenza izinto ngokuhlukile, zinikeza isixazululo sesikhathi sangempela, esikhokhelwayo sokukhokha samabhizinisi. I-Scoutmob uhlelo olusatshalaliswa kubathengi ku-Android, i-iPhone ne-Blackberry lapho abantu bengangena ngemvume futhi babheke isivumelwano, kepha basebenzise kuphela uma sebelungele.
Ukusuka Scoutmob Ikhasi le-FAQ:
Ngabe iScoutmob yehluke kanjani kulawo masayithi "okuthengwa kweqembu"? IScoutmob ifana nabo ngezindlela ezithile, kepha yehluke kakhulu kwezinye. Njengalawa masayithi, sinikeza i-imeyili isivumelwano sansuku zonke esitholakala amahora angama-24. Kepha ngokungafani namasayithi "okuthengwa kweqembu" laphaya, asidingi ukukhokha kwangaphambili kulawo makhasimende, ngakho-ke uthola ukugcina imali yakho oyisebenzele kanzima. Lokhu kunikeza abantu bendawo nabangaphandle mayelana nesikhuthazo esengeziwe sokuhlola izinketho zabo. Ngaphezu kwalokho, ipulatifomu yethu ephathekayo ikhuthaza la makhasimende akhokhelayo ukuthi abuye azophindaphinda ibhizinisi. Siphinde sihlinzekele amabhizinisi endawo kuphela, ngakho-ke umkhiqizo wakho uphakathi kokungcono kakhulu idolobha lakho elingakunikeza.
Yini isivumelwano esijwayelekile? Umlingo wamadili amadili weScoutmob “% off” ukuthi abangela amakhasimende aphakeme kakhulu ukuba aphule imikhuba yawo futhi azame ibhizinisi lakho, ngakho-ke konke esikucelayo ukuthi unikeze abalandeli bethu isivumelwano esihle. Ngemuva kwalokho siyakuvikela ngokufaka isaphulelo bese sikukhokhisa kuphela lapho amakhasimende ethu ethatha isinqumo sokuthi afuna ukuzama ibhizinisi lakho.
Ngizofakwa nini? Ithimba lethu lendawo lizosebenza nawe futhi lihlele usuku oluhle lokufaka ibhizinisi lakho. Ngemuva kwalokho, sizosebenzisana nawe ukudala ukubhala okuhlukile kwe-Scoutmob, ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende ethu (nabo bonke abangane babo) bazozwa ngesivumelwano sakho.
Ahlala isikhathi esingakanani amadili? Ibhizinisi lakho lizoba isici se-imeyili yethu newebhusayithi yethu usuku olulodwa. Ngemuva kwalokho, isivumelwano sakho sizohlala izinyanga ezintathu. Ngale ndlela, kukhona ukuphuthuma kokunikezwa okulinganiselwe, kepha kunesikhathi esanele samakhasimende weselula ukuthi angene (futhi abe ajwayelekile).
Kubiza malini? Kuze kube manje, ukuphela kwendlela yokukhangisa endaweni bekuwukukhokha inqwaba yemali ngaphambili, ngethemba ukuthi umyalezo uzobanjwa, bese unqamula iminwe yakho ukuthola ukuhamba ngezinyawo. NgeScoutmob, sicela kuphela inkokhelo uma usukhokhelwe amakhasimende ethu. Ufuna ukwazi okwengeziwe ngamanani entengo? Chofoza lapha ukuze ukhulume nethimba leScoutmob ngamanani entengo.
Ngikhokhelwa kanjani? Ukhokhelwa ngendlela okufanele ukhokhelwe ngayo: yilabo makhasimende abenelisekile abeza ukujabulela ukunikezwa kwakho. Ngemuva kwalokho, usikhokhela kuphela inani labalandeli bakaScoutmob ababanga isivumelwano.
Tags: amadili wendawo
PPC + Organic = Ukuchofoza okuningi